Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Muqdisho ku soo laabtay – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa saakay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu safaro nasiino iyo shaqo ku kala tagay, dalalka Jabuuti, Joordan iyo Turkiga.
Guddoomiyaha ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa ugu hortagay Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawa iyo Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka. Soo laabashada Guddoomiyaha ayaa ka dambeysay kadib markii uu soo dhamaaday fasax Baarlamaanka.
Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo xiliga uu furmayo Kalfadhiga 5aad ee Golaha Shacabka, kaas oo ay aheyd in la furo 10ka bishaan.
Guddoomiye Maxamed Mursal wali Warbaahinta lama hadlin, balse Xildhibaano katirsan Golaha Shacabka ayaa Kalfadhi u sheegay in Guddoomiyaha uu nasiino ku soo qaatay Turkiga. Sidoo kalane uu shaqo u aaday dalalka Joordan iyo Jabuuti waxa uuna meelaha qaar kaga qayb galay shirar ku saabsan Baarlamaanada Caalamka.
Gudoomiyaha golaha wakiillada Puntland oo sheegay in ay wada-shaqayn dhow la yeelan doonaan golaha shacabka JFS